The European Afrika na-ebe ma ama n'ihi na ya dị ịtụnanya na-atọ ụtọ chocolate. N'ezie, ọtụtụ chocoholics na-enwe njem sịnụ na ha nwere ohere nụrụ ụtọ na ụfọdụ ịtụnanya flavors n'oge ha njem. Ọ bụrụ na ị na-eme gị site Europe na-akpọ isiala nye chocolate, anyị…
Ndị na ndidi kechioma gaa Europe mara ụtọ, na-uche nke njem na ọ na-enye. Ejegharị ejegharị na Europe nwere ike ime ka ndụ gị na otutu ụzọ. si asụsụ, mma nlegharị anya, na akụkọ ihe mere eme mma oriri na i nwere ike ịhụ azụ n'ụlọ. Those…
Mgbe ọ na-abịa a Afrika ka ọdịbendị dịgasị iche dị ka Europe, ị nwere ike nzọ na gastronomic omenala ndị dị nnọọ ka dịgasị iche iche! Ọ bụrụ na ị na-na na njikere aka gị ike ala nile di iche iche nke na-akpali (anyị na-eji na adjective euphemistically ebe a) ụgbọ, mgbe ahụ nwere a anya…
Europe dị ka kọntinent dị iche iche, Europe na-eweta ihe ọ bụla ụdị njem - atọ ụtọ ata aru gụnyere. Ma ebe ga gị uto buds ike ụtọ kasị? What meal pic will have your Instagram racking up 100’s of likes? Kwụsị na-eche ma na-amalite munching….